Mgbochi nke fallopian akpa
ị bụ ebe a: Home afọ ime Mgbochi nke fallopian akpa
Ihe dị otu na anọ ikpe nke nwanyi enweghị ike ịmụ bụ n'ihi ihe mgbochi nke fallopian akpa. Ọ bụ na fallopian akpa njikọta spam, n'ihi na ha natara egg si ovary, na ịba spam. zaigọtụ, kpụrụ mgbe na mmakọ nke nwoke na nwaanyị inwe mmekọahụ mkpụrụ ndụ, na-abanye na eriri akpa nwa oghere, na ebe ọ bụ mmasị na mgbidi. Maka ndụ nke ndị inyom na nke a daa ọrịa, n'ozuzu, egwu adịghị adị, ma na-achọta ihe mgbochi na fallopian akpa (ọbụna dị ka Ntu extensions ime) может помешать процессу зачатия нормально протекать.
Ndị na-akpata ihe mgbochi nke fallopian akpa ihe:
endometrial daa ọrịa.
Benign nakwa ajọ neoplastic Filiks ke fallopian akpa.
Esi na ya pụta mụụrụ ọgwụ ite ime na-awa ahụ adọ on akarị n'afọ.
E meriri ndị omumu akụkụ ụkwara nta.
Congenital anomalies na Ọdịdị nke ahụ fallopian akpa.
Ọrịa nke omumu usoro.
The dysfunction nke mmiri ọgwụ usoro.
Mgbochi nke fallopian akpa: mgbaàmà.
Ọtụtụ mgbe a daa ọrịa nwere a kama adakarị stёrtuyu. Mgbochi nke fallopian akpa, mgbaàmà, у которой нечётко выражены, nakwa dị ka enweghị menstrual oge na-abụghị ime, Ọ ga-amalite ichegbu na nwaanyị na-abụkarị nanị mgbe a ọnụ ọgụgụ nke kụrụ afọ n'ala mgbalị ga-atụrụ ime. Naanị mgbe ụfọdụ e nwere ndị dị otú ahụ ihe ịrịba ama, dị ka ntighari mgbu ke ala afo, -enwe a na-eru agwa. Ị nwekwara ike na-enweta ihe mgbu mgbe nanso, ukwuu odo orùrù, nāgughi erughị ala na ihe mgbu n'oge mmekọahụ.
Mgbe nke mmezi collection of mgbaàmà, amalite na-achọpụta ọrịa usoro iji nyochaa nchoputa. Basic ụzọ maka mkpebi siri ike nke mgbochi nke fallopian akpa:
Transvaginalьnый gidrolaparoskopicheskiй usoro.
Ọgwụgwọ nke mgbochi nke fallopian akpa.
Ọgwụgwọ nke mgbochi nke fallopian akpa ga-n'ụzọ dị ukwuu-adabere na ole na-agba ọsọ a daa ọrịa, n'ime ihe ndị mere nke mere ka ya na uma nke mgbaàmà. Mgbe ụfọdụ, ọ bụ iji na-normalize ndị homonụ na iwepụ oké nchegbu. Na mkpali oria egosi antibacterial ọgwụ ọjọọ eme ihe, physiotherapy, na ụfọdụ ịwa. Na nke ọ bụla, onye ahụ nke mbụ enyo enyo na nke Tubal mgbochi-achọ ọgwụ ndụmọdụ ozugbo.
Atiya: afọ ime